How'd it happen and more reports?: မြန်မာပြည်မှာ Economics ဘာသာရပ်ကို ဘာလို့ သင်ရခက်နေသလဲ?
မြန်မာပြည်မှာ Economics ဘာသာရပ်ကို ဘာလို့ သင်ရခက်နေသလဲ?
ဥပမာ - Law of Demand states that there are inversely related quantity demanded and it's price လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာ ဈေးနှုန်းတွေကျရင် -- ပိုဝယ်ချင်မယ်။ ဈေးနှုန်းတွေတက်မယ် ဆိုရင် -- လျော့ဝယ်ချင်တဲ့သဘောပေါ့၊
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ ဈေးနှုန်းတွေကျပြီဆိုရင် မ၀ယ်ချင်တော့ဘူး၊ေ ဈးနှုန်းတွေတက်ပီဆိုရင်တော့ ပြေးဝယ်တော့တာပဲ၊ထပ်တက်ဦးမှာလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က ကြီးစိုးနေတာကိုး၊
ဒါကို Exceptional Demand လို့ခေါ်တယ်။ ဒီလို Exceptional Demand အခြေအနေမျိုးဟာခဏပဲကောင်းတယ်။ အကြာကြီး မဖြစ်သင့်ဘူး၊
မြန်မာပြည်မှာတော ဒီ Exceptional Demand nature ဟာ 1962 ခုနှစ်ကတည်းက အခုထိပဲ၊ အတော်ကြောက်စရာကောင်းနေပီ၊
ဒီလိုပဲ -- Law of Supply မှာလည်း ဈေးတက်ရင် ပိုရောင်းချင်တယ်။ ဈေးကျရင် မရောက်းချင်တော့ဘူး၊
လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ ဈေးကျပြီးဆိုရင် ထပ်ကျသွားမှာ ဘ၀ပျက်သွားမှာ စိုးလို့ ထိုးရောင်းတော့တာပဲ၊
ဈေးတက်မယ်ဆိုရင်လည်း ထက်တက်ဦးမှာလား၊ ပစ္စည်းပဲပြတ်တော့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့
ဒါကိုလည်း Exceptional Supply လို့ခေါ်တယ်။ သို့သော်လည်း အကြာကြီး မဖြစ်သင့်ဘူး၊
ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာ 1962 ကနေအခုအထိ Exceptional Supply Situation ဖြစ်နေဆဲပဲ၊
၁။ စီးပွားရေးမှာတောင် Exceptional Situations တွေနဲ့ immune ဖြစ်နေတော့ တော်ရုံသာမာန် ကိစ္စတွေဟာ မတိုးနိုင်တော့ဘူး၊
၂။ သူများတွေအမြင်နဲ့ ကန့်လန့်ဖြစ်လာတယ်။ သာမာန်အမြင်အားနည်းတာတော့ အမှန်ပဲ။
၃။ အမှန်မပြောချင်တော့ဘူး၊ အမှန်လည်း မပြောရဲဘူး၊ ညာတာလေးပဲယုံချင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း မုသားကိုထည်လဲ သုံးတတ်လာတယ်။
၄။ သီအိုရီနဲ့ လက်တွေ့ကွာလာတယ်။ လက်တွေ့က ပုံမှန်မှမဟုတ်တော့တာ။
၅။ Exceptional ကကြီးစိုးနေတော့၊ Expectation ခေါ်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ကလည်း မရှိသလောက်ဖြစ်လာတယ်။ စည်းကမ်းတွေပျောက်သွားတယ်ပေါ့၊ စည်းကမ်းဆိုတာ ချိုနဲ့လားလို့ မေးယူရမလိုဖြစ်လာတယ်။ responsibility တို့၊ Accountability တို့ကလည်း ပြောသာပြောတာ၊ ကျွဲပါးစောင်းတီး၊ တောင်ပြောမြောက်ပြော Third Wave လှိုင်း တောက မထွက်သေးဘူး၊
၆။ Expectation မရှိဘဲ၊ Exceptional တွေချည်းဖြစ်နေတော့လည်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ယုတ်စွအဆုံးဘာသာရေးမှာတောင်၊ ကမောက်ကမတွေဖြစ်လာတယ်။
၇။ အဆိုးကတော့ လူမှုရေးမှာ Exceptional ဖြစ်တာအဆိုးဆုံးပဲ၊ လူလည်တွေက လူမိုက်တွေကို အတတ်ကောင်းတွေသင်ပေးတယ်။ အက်ကြောင်းရှိနေရင်၊ ကွဲသွားတောင်၊ ဖရိုဖရဲဖြစ်အောင် လုပ်တတ်လာတယ်။ ဘာကိုမှ Expect မလုပ်တော့ဘူး၊ မျက်မွှေးတစ်ဆုံးလောက်ပဲ မြင်တယ်။ မျက်စီတစ်ဆုံး အညောင်းခံမကြည့်တော့ဘူး
၈။ သံသယတွေကြီးစိုးလာတော့ အမှန်ဘ၀ပျောက်လာတယ်။ ကျနော်တို့ အရင်ဦးဆုံးပြင်ရမှာ က ဒီ Exceptional ဘ၀မျိုးကနေ Normal situation ကိုရောက်ဖို့ အရင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။
တချို့ဗမာလူမျိုးတွေဟာတော်ကျပါတယ် ဒါပေမဲ့ စည်းလုံးမှုမရှိဘူး၊ အချင်းချင်းတောင် သစ္စာမရှိကျပါဘူး၊ အများအားဖြင့် နေရာတကာ ငါသိငါတတ်လုပ်တတ်ကျတယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ် လုံးဝမရှိကျတာများတယ်၊ သူများလုပ်တာကို အတုခိုးတတ်ကျတယ်၊ နေရာတကာဗိုလ်လုပ်ချင်ကျတယ်၊ လိမ်ညာတတ်ကျတယ်..
Interested in the potential to earn college credit for an Economics course? Learn morehere.